फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नुहोस् - Mountain Media
फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं – बिहिबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। बुधबार तोलामा ७ सय रुपैयाले घटेको सुनको मूल्य आज पनि ७ सयले नै घटेको हो ।
बुधबार प्रतितोला ९२ हजार ५ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज ७ सय रुपैयाले घटेर तोलाको ९१ हजार ८ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला ९१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य बढेर तोलाको १ हजार २ सय ७० रुपैयामा नै कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । अन्य समाचार
Previous: अस्पतालको बेडमा नयाँ जीवन खाेज्दैछिन् ‘चम्सुरी’
Next: निशा घिमिरेलाई हस्पिटल भित्रै बि,ष खुवाउने,भाइ बनेर सेक्युरिटी तो,डेर भित्र जानेको गो,प्य प्र,माण भेटियो (भिडियो हेर्नुस)